Activator | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
KMS Activator Ultimate 2015 2.4
KMS Activator Ultimate 2015 2.4 | 14.79 MB
Windows KMS Activator Ultimate 2015 is the most Simple & user-Friendly activator for Windows Vista, 7, 8, 8.1. It is Safe activator with no harm to System Files. Period of activation is 180 days and you can renew it. You can remove any previous activations. You can know information about your activation, your window s serial and the rest days of activation.
ကဏ္ဍ Activator, Window
သင့် ကွန်ပျူ တာလေး Active မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေ ပါသလား ?
Windows 8.1 Activator Loader (2015)
Windows 8.1 ကို အသုံးပြု နေကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် Activator လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကြုံဖူးကြ မှာပါ ကွန်ပျူတာက သုံးနေရင်း ကနေ သူ့ အလိုလို Restart ကျ သွား တာမျိုးပါ။
အဲဒါက မိမိ ကွန်ပျူတာက Active မဖြစ်နေ လို့ပါ။
အခု ကျနော် တင်ပေး လိုက်တဲ့ Activator ကတော့ Windows 8.1 အားလုံးကို Active ပြု လုပ်ပေး
င်္From : www.zunite.org
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, January 21, 2015 No comments:
ဝင်းဒိုး 7, 8, 8.1,10 အထိ Activated လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ
ဒီ Window Activator ဆော့ဝဲလ် လေးကတော့ တလောကမှ ထွက်လာတဲ့ Window 10 ကိုပါ Activated နိုင်တဲ့
ဆော့ဝဲ ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ် သေးသေးလေးနဲ့ Window အားလုံးကို Activated လုပ်နိုင်တာကြောင့် ကွန်ပျူတာ သုံးသူတိုင်း ဆောင်ထား
သင့်ပါတယ်။ Window တွေတင်မကပဲ Microsoft Office 2007,2010,1013 ကိုလည်း Activated လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဒီ Activator မှာ ထူးခြား တာကတော့ Windows Watermark Remover ပါ ပါဝင်ခြင်းဖြစ် ပါ
တယ်။ Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP အစရှိတဲ့ Window အားလုံးနီးပါ ကိုပါ Activated လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လော
လောဆယ် Window 10 အတွက် တောင်းထားသူ ရှိလာလို့ ဒီကောင်လေး တင်ပေး လိုက်တာပါ။ Window 10 ကို
တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Original Key (32 + 64).. NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
All Window Activartor ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် : မိမိ ကွန်ပျူတာ အတွင်းမှ Antivirus ကို ပိတ်ပြီးမှ Activator ဆော့ဝဲကို ဖွင့်ပါ။
From : ဘလော့ခရီးသည် by ဇော် မင်း သန်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, October 19, 2014 1 comment:
Active File Recovery for Windows 13.0.15 (x64) Full Version Free Download
Active File Recovery recovers data asaresult of having been accidentally deleted, formatted or otherwise lost, includesaPartition Recovery tool.
ကဏ္ဍ Activator, Recover
Windows7Activate မဖြစ်သူများ အတွက်
window7 သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အဖြစ် များတဲ့ Desktop မှာ အမည်းရောင် နောက်ခံ ပုံကြီး ဖြစ်
သွားပြီး ကိုယ်တင် ထားတဲ့ Desktop ပုံ ပျောက်သွား တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Desktop ညာဖက်အောက်
ထောင့်နားမှာ ပုံမှာ ပြထားသလို Activate Windows Now ဆိုပြီးဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
အဲဒါက Online အမြဲတမ်း သုံးတတ်တဲ့ Computer တွေမှာ အဖြစ်များ ပါတယ်။ Computer မှာ Windows
တင် ကတည်းက Windows Update ကို Auto update ဖြစ်နေလို့ပါ။
အဲဒါကို Never Check For Updates လို့ပြောင်းပေး လိုက်ပြီး ခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Windows Crack ကို Run ပေးလိုက်ပါ။
Install မလုပ်ခင်မှာ မိမိစက်မှာ သွင်းထားတဲ့ Antivirus ကို ခနတော့ Disable လုပ်ထားပေးပါ။
Windows ပြန်တက်လာလျှင် မိမိတင်ထားတဲ့ ပုံနှင့် ပြန်တက်လာ ပါလိမ့်မယ်။
Credit to---Myanmar It Academy
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 07, 2014 No comments:
ဝင်းဒိုး အက်တစ် မဖြစ်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်
Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix With keys
Windows Loader ကို အားလုံး သိကြမှာပါ this copy of windows is not genuine ဆိုပြီး Screen နောက်
ခံ အမည်းရောင်ကြီးနဲ့ Window Activate မဖြစ်သေး တာကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့ Software လေးပါ...
Window Activated မဖြစ်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် နောက်ဆုံးထွက် Loader လေးပါ.သတိပေးစရာ
တစ်ခု ရှိတာကတော့ WAT Fix ကို RUN နေချိန် မှာ ဘာမှ မနှိပ်မိဖို့ပါဘဲ...ဒေါင်းယူ Run ပြီး Install ကို နှိပ်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 24, 2014 No comments:
Adobe Cs7 dll Download
ခုပြန်တင်ပေး လိုက်တာက တော့... cs7 (Adobe CC) dll crack ဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ dll ဖိုင်လေးက ပိုတို
ရှော့ တစ်ခုမှာပဲ အလုပ် လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခြား Adobe နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ cs7 ဆော့ဖ်ဝဲတွေ မှာ
လည်း အလုပ်လုပ် ပါတယ်။
ကျွန်တော့ကို တောင်းတဲ့ သူ များလို့ တင်ပေးလိုက် ရချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Adobe Products
တွေကို ကိုယ်ပိုင်လင့်ခ် နဲ့ ပြန်တင်ဖို့က ခဲရင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့
Version တွေရဲ့ ဆိုက်ဒ်က အင်မတန်မှ ကြီးလှပါတယ်၊ တင်ပြီးရင်လည်းပဲ Link တွေက သေသွားပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ (Main Website) ကနေ Trial ကိုဒေါင်းပြီး ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ Crack တွေနဲ့ Full Version
ပြန်လုပ်လိုက်ကြပါ။ Crack နည်းလမ်း ကတော့ ရှင်းလင်းပါတယ်၊ Photoshop cs7 ဆိုရင် သူ့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ဒီဖိုင်လေးကို Copy လုပ်ပေးပြီး အစားထိုး ပေးလိုက်တာနဲ့ ဖြစ်သွားမှာပါ။
Photoshop အပြင်တစ်ခြား cs7 ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ကိုလည်း ဒီနည်း အတိုင်းပဲ Full Version လုပ်သွားလိုက်ပါ။
cs6 ကို Crack တဲ့ နည်း အတိုင်းပါပဲ၊ အဲ့ဒီလုပ်နည်း ဗီဒီယို ကိုလည်း တင်ပေးထားပါတယ်။
Direct 2shared Cloud uppIT
Video ကို ဒေါင်းယူရန် (Video Link)
Kogeelay ဆိုဒ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
ဝင်ဒိုး ၈ - ၈.၁တွေ အက်တစ် မဖြစ်သေး သူများ အတွက် နောက်ဆုံးထွက် Activator
ဝင်ဒိုး ၈ - ၈.၁တွေ အက်တစ် မဖြစ်သေး သူများ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အသစ် ထွက်လာတဲ့ Activator
လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဝင်ဒိုး Vista ကနေ ဝင်ဒိုး7ဝင်ဒိုး 8 /8.1 တွေ အထိ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်... Update Activator
လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ...။
Name : KMS Activator Ultimate
Version : 2014v1.9
OS Support : Vista/7/8
Code File : kaul2014v1.9
Updated : 22 Maret 2014
Features in 1.9
ဝင်းဒိုး ၈.၁ အက်တစ်ဗေတာ Loader (Pro, Enterprise, Sever 2012 တို့ကို Activate လုပ်မယ်)
ဝင်းဒိုး ၈.၁ အက်တစ်ဗေတာလေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်၊ အက်တစ် လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ ဗားရှင်းတွေကို
Windows 8.1 Activator Loader (Pro, Enterprise, Sever 2012 တို့ကို Activate လုပ်မယ်)
Window Sever 2012
တို့အတွက် Acrivate လုပ်ပေးမယ့် Windows 8.1 Activator Loader ပါ
လိုအပ်ပါက အောက်မှာ Download ပါ
From: ဝင်းကမ္ဘာကျော် by ThanToeAung